प्रदेश २ मा किन जान चाहँदैनन् डाक्टर ? यस्ता छन् कारण... | Hamro Doctor News
प्रदेश २ मा किन जान चाहँदैनन् डाक्टर ? यस्ता छन् कारण...
जनकपुर, ४ असोज । लामो समयदेखि रक्तक्यान्सरको विशेषज्ञका रुपमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत डा. अजय कुमार झा जनकपुरवासी हुन् । उनलाई पनि आफ्नै जन्मभूमिमा गएर सेवा दिने मन छ । तर, आफुले गरेको अध्ययन अनुसारको काम गर्ने वातावरण जनकपुरमा नहुँदा त्यहाँ बसेर काम गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनको निश्कर्ष छ । ‘आफ्नो घर क्षेत्रमा काम गर्ने रहर कसको हुँदैन । तर, पूर्वाधारको असुविधा, अध्ययन गरेको विषयमा काम गर्ने वातावरण र अस्पतालमा उपकरण तथा राम्रो नेतृत्व नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।’ उनले सुनाए ।
दुई वटा मेडिकल कलेज रहेको प्रदेश नम्बर २ मा जानकी मेडिकल कलेज सँधै विवादमा मुछिँदै आएको छ भने विरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा पनि पूर्वाधार विकास नहुँदा र तीव्र व्यवसायिक हुँदा समस्या छ । बिरामीको उपचारको क्रममा केही भयो भने सोझैं चिकित्सकलाई घटना नबुझी हातपात गर्ने नागरिकको क्रियाकलापले पनि २ नम्बर प्रदेशमा काम गर्न असहज भएको चिकित्सकहरुको गुनासो सुनिन्छ ।
युवा चिकित्सक डा.सन्देश दाहालले प्रदेश नम्बर दुई स्वास्थ्यको सुचकांकमा सबैभन्दा पछि परेको थाहा हुँदापनि त्यहाँ गएर काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँछन् । अञ्चल अस्पतालको अवस्था विकास हुने क्रममा भएपनि त्यहाँको बाह्यदेखि भित्री वातावरण काम गर्न सहज खालको नभएको उनलाई लाग्छ । काम गर्नका लागि अस्पतालमा सहि अवस्थाका उपकरण, दक्ष जनशक्तिको अभाव, भवनको अभाव र नेतृत्व पनि कमजोर भएको उनको तर्क छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नम्बर २ को जनसङ्ख्या झण्डै ४६ लाख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ५ वर्ष अघिको सर्वेक्षणले ३ सय ७९ वटा स्वास्थ्य संस्था प्रदेश दुईमा रहेको देखाउँछ । स्वास्थ्य संरचना विकास गर्ने र चिकित्सकको दरबन्दी थप्ने बारे मन्त्रालयले भने नीति नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा जुटेको बताएको छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख जनार्दन गुरागाईका अनुसार प्रदेश २ मा चिकित्सकलाई पठाउन र उनीहरुको मूल्यांकनका लागि अब नीती नै परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ । नयाँ नीतिमा चिकित्सकलाई काम गर्नका लागि विशेष सुविधा र मूल्यांकन गरिने उनको भनाई छ ।
जिल्ला अस्पताल होस् वा अञ्चल अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या हुने गरेको छ । यस्ता समस्या समाधान लागि तीनै तहका सरकारले समस्याको पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ । पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीले कुनैपनि क्षेत्रमा डाक्टरहरु किन जान मान्दैनन् वा चाहँदैनन् त्यसबारे तीनै तहको सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
पछिल्लो तथ्याङ्कले एकजना चिकित्सकको भागमा १४ हजार भन्दा धेरै बिरामी पर्ने देखाउँछ । प्रदेश नम्बर दुईमा जम्म १ सय ९ जना डाक्टरको दरबन्दी रहेकोमा ५७ जना मात्रै कार्यरत छन् । जसमा एकजना चिकित्सकले वर्षेनी झन्डै ८० हजार बिरामी जाँच्नु पर्ने अवस्था छ ।
Last modified on 2018-09-20 10:54:28